बालबच्चालाई उपहारमा के दिने ? -
VoiceNp	प्रकाशित मिति: आइतबार, पौष ०५, २०७७ समय: २३:१५:२८
बालबालिकाले जब कुनै राम्रो काम गर्छ, तब उनीहरुलाई थप प्ररणा दिन उपहार दिने गरिन्छ । परिक्षामा उत्कृष्ट अंक हासिल गरेमा वा कुनैपनि क्षेत्रमा प्रगति गरेमा उनीहरुलाई उपहार दिइन्छ । यसैगरी जन्मदिन, नयाँ बर्ष, क्रिसमस जस्ता विशेष अवसरहरुमा पनि उपहार दिने चलन छ ।
यसरी उपहार दिएपछि उनीहरु खुसी हुन्छन् । खुसी मात्र होइन, उनीहरु राम्रो काम गर्न प्रेरित हुन्छन् । यद्यपि उनीहरुलाई कस्तो उपहार दिने ? कुन उपहार सही हुन्छ ?
यही विचारले हामी बच्चालाई पुस्तक उपहार दिन्छौं, पेन्टिङका सामाग्री उपहारमा दिन्छौं । यसैगरी घडी, गुडिया वा अरु किसिमको सजावटको सामाग्री उपहार दिन्छौं । यी उपहारमध्ये कुनै हामीलाई ज्ञानवद्र्धक लाग्छ भने कुनै सजाउन मिल्ने किसिमको ।
उनीहरुले रोपेको वोट विरुवा जति झांगिदै र सप्रिदै जान्छ, उत्तिनै उनीहरुमा खुसी एवं उमंग पनि बढ्दै जान्छ । यसले एउटा संस्कारकै रुप लिन्छ ।